Alexis Sanchez oo 48-da saacadood ee soo aaddan ka tagaya Manchester United & Kooxda uu ku biiri doono oo la ogaaday – Gool FM
Alexis Sanchez oo 48-da saacadood ee soo aaddan ka tagaya Manchester United & Kooxda uu ku biiri doono oo la ogaaday
(Manchester) 19 Agoosto 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Alexis Sanchez ayaa la soo warinayaa inuu ku biiri karo naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga inta lagu guda jiro 48-da saacadood ee soo aaddan.
Xiddiga xulka qaranka Chile ayaa alabaabada u furay inuu ka tago garoonka Old Trafford, markii kaliya uu shan gool u dhaliyey kooxda tan iyo markii uu kaga soo dhaqaaqay Arsenal, kooxda Man United ayaana eegeysa inay bedesho mushaarkiisa qaaliga ah ee uu ka qaato.
Macallinka kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa Sanchez u arka dhibaatada uu ku xalin kara safkiisa maadaama uu ku guuldarreystay inuu la soo wareego Edin Dzeko, kaasoo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Roma.
Heshiiska uu Sanchez ku aadayo garoonka San Siro ayaa noqon doona amaah hal xilli ciyaareed ah, iyadoo qandaraaskiisa la burburin karo dhammaadka ololahan iyadoo United ay bixin doonto kala bar mushaharka 30-sano jirkaan mudadaa amaahda ah, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport.
Sanchez ayaa raaci doona tallaabadii uu horay u qaaday weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku, kaasoo ka tagay Man United, isla markaana ku biiray Inter Milan horraantii xagaagan.
Waxa ay u badan tahay in labadaan ciyaaryahan oo horay uga tirsanaa kooxda Man United ay si wadajir ah ugu ciyaaraan weerarka kooxda Inter, isla markaana habka macallin Conte uu u dooran doono kooxda Nerazzurri uu yahay shaxda 3-5-2.
Kaddib markii ay Bayern Munich ku dhawaaqday saxiixa Coutinho wax ka ogow xiddigaha ay la soo wareegtay kooxda reer Jarmal xagaagan
Waa maxay waxa xun ee ku dhacay xulkii awoodda badnaa ee Talyaaniga & Sababaha ka dambeeyey hoos u dhaca ku yimid?